Nezvedu - Baoding Lekai International Ltd.
Musi waZvita 24, 1953, musangano wehurumende wechi1999 weState Council wakaita "Sarudzo pamusoro pekugadzwa kwemafirimu ekuratidzira network uye indasitiri yemafirimu" uye vakasarudza kuvaka fekitori yemafirimu kuChina.
Musi waChikunguru 1, 1958, kutyora kwepasi kwakaratidzirwa kuguta reBaoding, Dunhu reHebei. Zita rekutanga rekambani, Baoding Filmstrip Factory, rakagoneswa.
Musi waChikunguru 1, fekitori Workshop 101 yakaiswa mukugadzirwa ndokugadzira batch yekutanga yevatema nechena positives firimu muChina, iine mazana mana nemazana mana emamiriyoni emamiriyoni akaburitswa gore iro. Yakabudirira kugadzira muedzo wekutora mifananidzo muAugust uye 135 firimu muna Gumiguru.
Muna 1969, dema uye chena positives firimu, nhema uye chena yepakati-kumhanya zvakashata, uye mafirimu kurekodha zvakashata zvakatanga kutumirwa kunze kwenyika.
Muna 1972, dema uye chena inodzosera firimu uye nhema uye chena yepamusoro-mhanya firimu (HD-5) yakatanga kuendeswa kunze.
Muna 1974, vatema nechena mafirimu akanaka uye mafirimu emuchadenga akatanga kuendeswa kunze.
Muna 1977, matepi emuvhi uye aqueous color akanaka mafirimu akatanga kubudiswa kunze.
Muna 1981, solvent color color yakanaka mafirimu akatanga kuendeswa kunze.
Muna 1985, mavara asina kunaka mafirimu akatanga kutumirwa kunze kwenyika.
Muna 1986, 120 135 nhema uye chena mafirimu asina kunaka akatanga kuendeswa kunze.
Muna 1993, China Lucky Film Group Corporation yakapihwa mvumo yekupinza uye kutumira kunze manejimendi neHurumende maHofisi, panguva iyi Dhipatimendi Rekunze uye Export rakavambwa.
Musi waNdira 22, 1998, Lucky Film yakanyoreswa zviri pamutemo paShanghai Stock Exchange. Lucky Film Co., Ltd, iyo inotsigira yeChina Lucky Film Corporation yakavambwa.
Kubvumbi 1, 2011, Baoding Lekai International Ltd. yakavambwa mushure mekushandurwa kweChina Lucky Film Corporation Kunze uye Kunze Kambani Kambani. Iyo yakatemerwa chikwereti kambani ine yakazvimiririra kupinza kunze kwenyika uye kodzero yekutengesa uye yakazvimirira yepamutemo hunhu yakachengetwa neChina Lucky Film Corporation.
Kusvika pari zvino, vaparidzi vaLucky vekunze kwenyika vari muAsia, America, Europe, Africa, uye vakagadzira matavi muSouth Asia, Africa neMiddle East, South America nedzimwe nzvimbo dzakakosha. Rombo remifananidzo zvigadzirwa, zvigadzirwa zvekurapa, zvitsva simba zvigadzirwa, uye akakosha anoshanda emafirimu zvinhu zvakatengeswa kune dzinopfuura makumi masere nyika nematunhu epasi. Panyaya yekutenga bhizinesi, isu tinochengetedza yakanaka bhizinesi kutaurirana nevatengesi vanopfuura makumi maviri mune dzinopfuura nyika gumi.
Tiri kutarisira kushandira pamwe newe.